Faafaahino hor leh oo ka hadlaya sidii loo qorsheeyey qaraxii Xarunta Dowlada Hoose Xamar… – Hagaag.com
Faafaahino hor leh oo ka hadlaya sidii loo qorsheeyey qaraxii Xarunta Dowlada Hoose Xamar…
Baaritaano laga sameeyay qaraxii uu ku dhintey guddoomiyihii hore ee gobolka Banadir iyo qaar kamid ah mas’uuliyiinta gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu ogaaday in haweeneydii ka dambeysay ay fasax qaadatay kahor labada munaasabadood ee 26june iyo 1da Luliyo iyadoo laga yaabo inay qorsheysay inay isku qarxiso xarunta Maamulka gobolka Banaadir munaasabadihii 26june iyo 1da Luliyo ee sanadkan.
Munaasabadahaa ka dhacay xarunta gobolka Banadir ayaa waxaa ka soo qeybgalay madax uu ka mid ahaa Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyadoo la aaminsan yahay in qorshaha uu ahaa in halkaas uu qarax ka dhaco balse u suurtogeli weysay Basiira waxaana arrintaan weli lagu wadaa baaritaano dheeraad ah.
Warbixino soo baxay ayaa sheegaya in magaca Basiira Cabdi Axmed oo looga yiqiin xarunta maamulka gobolka Banaadir gabadha la aaminsan yahay inay is qarxisay uu ahaa magac been abuur ah balse magaceeda dhabta ah uu ahaa Maryan Cabdi Axmed waxana ay ka mid ahayd shaqaalaha gobolka Banadir tan iyo bishii May 2018.
Sidoo kale Deggan oo loo yiqiin gabadhii kaalmeyn jirtey ayaa magaceeda runta ah lagu ogaaday baaritaanka inuu ahaa Hodon.
Warbixintan oo ay qortay VOA ayaa sidoo kale lagu sheegay in Basiira iyo Deggan ay qaateen fasax bishii June ee sanadkaan iyadoo Basiira ay codsatay in ay u safarto dalka Hindiya si ay dhakhtar ula soo kulanto waxaana uu guddoomiyaha gobolka Banadir Enj Yariisow uu siiyay toban kun oo dollar, balse ay tageen deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab.
Maalintii uu qaraxu dhacay ayaa la sheegay in ay Basiira gashay gudaha xarunta iyadoo codsatay inay la kulanto guddoomiyaha gobolka balse kaaliyashiisii ay u sheegeen inuu mashquulsan yahay.
Balse Basiira ayaa timid xarunta gobolka kadib markii uu baxay wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan oo la kulmay Guddoomiyihii gobolka Banaadir.
Basiira iyo gabadhii hagaysay ayaa la sheegay in ay gudaha u galeen xarunta gobolka iyagoo aan la baarin waxaana fasax ku maqnaa xilligaas haweeney u qaabilsanayd xarunta inay baarto dumarka.
Basiira oo magaceeda dhabta ah uu ahaa Maryan ayaa goor hore gashay gudaha hoolka uu qaraxu ka dhacay iyadoo fariisatay kursi aan ka fogeyn halka uu fariisanayay guddoomiyaha gobolka balse Hodon oo hogaamin jirtey ayaa la arkay iyadoo walwalsan oo hore iyo gadaal u socota oo qolka marna galaysay marna ka baxaysay.
Baaritaanada ayaa lagu ogaaday in waxyaalaha qarxa inay ku xirnaayeen jirka gabadha is qarxisay.